DEG DEG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda gaaray degmada Garbahaareey
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka ee Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu hogaaminaayo, ayaa waxay maanta safar aan horey loo sii shaacin ay ku taggeen Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa oo diyaarad gaar ah ka raacay Garoonka Aadan Cadde, ayaa waxay kaga cago dhigteen Garoonka macmalka ah ee Magaalada Garbahaarey.
Ka hor intii wefdiga Madaxweynaha aynaan gaarin Magaalada Garbahaarey, ayaa waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee Magaalada, iyadoo Ciidamada Amisom, Dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna lagu arkaayo qaybaha kala duwan ee Garbahaarey.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa socdaalkaan ku wehlinaaya Wasiiro, Xildhibaano iyo Saraakiil Ciidan, sidoo kalana waxaa la socdo qaar ka mid ah Ciidamada sida gaarka ah u tababaran.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdigiisa waxay hadda ku sugan yihiin Xarunta Degmada, halkaa oo ay kulan kula lee yihiin Saraakiisha Dowladda, Ahlu Sunna iyo Amisom.
Suxufi ku sugan Magaalada Garbahaarey, ayaa Alldhacdo.com u sheegay in ujeedada Madaxweynaha ee Garbahaarey ay la xiriirto, sidii uu ugu kuur-geli laheyd arrimo bini’aadanimo oo ka jirta Gobolka Gedo.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil, ayaa Arbacadii shalay sheegay in xaalad adag oo xagga nolosha ah ay ka jirto Gobolka Gedo, iyadoo uu ku qaylo dhaamiyay in dadka reer Gedo loo soo gurmado.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa muddooyinkaan dambe lagu eedeynaayay in Dowladdiisu ka gaabisay, xaalada adag ee ka jirta qaybo ka mid ah Gobolada Koonfurta iyo Bartamaha ee Somaliya.
Al-shabaab oo degmo muhiim ah faarujiyay iyo ciidamada Huwanta oo dhaqaaqay
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa ku dhaqaaqay Degmada Qansaxdheere ee Gobalka Baay, sida uu sheegay Guddoomiyaha Degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan.
Guddoomiyaha Bardaale, wuxuu sheegay in ciidamada oo kaashanaya dadka shacabka ah ay ku baxeen Degmada Qansaxdheere, kadib markii uu sheegay in Maamulkii Al-Shabaab ee Degmadaasi uu isaga baxay halkaasi sida uu Guddoomiyaha warka udhigay.
Maxamed Isaaq Xasan wuxuu tilmaamay in Gobalka Baay uu ka socdo kacdoon shacab, islamarkaana Al-Shabaab ay ka carareen kacdoonka shacabka wuxuuna sheegay in xalay ay ka baxeen Qansaxdheere Shabaabka oo ay aadeen dhanka Degmada Diinsoor ee Gobalkaasi Baay.
Wuxuu ku nuux-nuuxsaday Guddoomiyaha in ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ay gaari doonaan Degmada Qansaxdheere saacadaha soo socda oo maanta ah.
Shacabka Gobalka Baay ayuu ku tilmaamay kuwa fahmay dhagarta Al-Shabaab iminkana ay bilaabeen ka dhiidhinta dhibaatooyinka Al-Shabaab ay ku hayeen shacabka.
Majirto ilo kamadaxbanaan Maamulka Degmada Bardaale oo xaqiijinaya in ciidamada Al-Shabaab xalay ay isaga baxeen Degamada Qansaxdheere ee Gobalkaasi Baay.
Saraakiisha Al-Shabaab iyo kuwa Dowladda ayaa Warbaahinta isku mariya hanjabaado kala duwan oo ku aadan in dhinacba dhinaca kale ay kaga taqalusi doonaan dagaalo ay qaadayaan.
Madaxda Dowlada oo wado qorshe ay ku sii jeedinayaan Xildhibaanada & Odayaasha Beelaha Hawiye (Warbixin)
Madaxda Dowladda Federalka ee Soomaaliya, ayaa waxay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku mashquuliyaan Xildhibaanada iyo Odayaasha Golaha Dhaqanka ee Beelaha Hawiye. Xilli ay sheegeen in Beelaha Hawiye ay 80% deggaan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxda Dowladda, ayaa waxay wadaan dadaalo ay ku doonayaan inay Maamulo ugu soo sameeyaan Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug, si Beelaha Hawiye kaga mashquulaan Maamulka Kmg ah ee loo dhisaayo Gobolada Bakool, Baay iyo Shabeellaha Hoose.
Sida qorshuhu yahay dhismaha Maamulada loo sameynaayo Gobolada Dhexe, ayaa waxaa lagu soo beegayaa, xilli lagu wado in Maamulka Kmg ah loo dhiso Maamulka Koonfur Galbeed.
Agaasimihii hore ee Madaxtooyada Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan (Guutaale), ayaa wada abaabulka Dowladda ee ku aaddan, sidii laba Maamul ugu soo dhisi laheyd Gobolada Mudug, Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Kamaal Guutaale, ayaa maalmihii ugu dambeysay si weyn loogu arkaayay Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia, iyadoona uu Madaxda Dowladdu kaga waramaayo hadba halka ay mareyso qaban qaabada.
Hase ahaatee Madaxdu waxay la socotaa in Xildhibaanada iyo Odayaasha Dhaqanka ee Beelaha Hawiye, ay ka soo horjeedaan in Gobolka Shabeellaha Hoose lagu daro Baay iyo Bakool. Iyagoo ku doodaaya in Gobolka Shabeellaha Hoose uu ka tirsanaa Ex Banaadir.
Sidoo kale Xildhibaanada iyo Odayaasha Hawiye, ayaa waxay ku doodayaan in Gobolka Shabeellaha Hoose aanu ka maarmi karin Gobolka Shabeellaha Dhexe, isla-markaana uu ka jiro Maamulka Shabelle State, oo ku yimid bay yiraahdeen rabitaanka dadka Deegaanka.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Dr. C/weli Sheekh Axmed Maxamed, oo kulan la qaatay Wasiirada Beelaha Hawiye, ayaa waxay u sheegeen in Gobolka Shabeellaha Hoose uu kaga mahiimsan yahay afarta Gobol ee kale.
Waxaa kaloo jira cadaadis ka imaanaaya bulshada Gobolka Hiiraan, oo ku adkeysanaaya in Gobolka Hiiraan uu yahay midka ugu weyn Gobolada Soomaaliya, isla-markaana uu kiligii u dhigmo laba Gobol. Waxayna soo jeediyeen in kiligii loo sameeyo Maamul Goboleed u madax banaan.
Siyaasiyiinta Gobolka Hiiraan oo qaarkood ka hadlay Maamulka ay Dowladdu qorsheyneyso inay u sameyso Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, ayaa waxay sheegeen inaanay suurta gal ahayn. Waxayna ka dhawaajiyeen in Gobolka Hiiraan uu ka dhigan yahay laba Gobol, ayna doonayaan in loo sameeyo Maamul Goboleed uu ku gaar yahay. Isla-markaana Shabeellaha Dhexe la raaciyo Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dhanka kale waxaad arkeysaa in Madaxda Dowladdu uu waqti badan kaga lumaayo hirgelinta Nidaamka Federalism-ka, iyadoo markaasi Maamulo loo sameynaayo Gobolada dalka, si leesku raaciyo hadba Gobolada is raaci kara. Dastuurkuna wuxuu dhigayaa in laba Gobol iyo wixii ka badan ay Maamul Goboleed noqon karayaan.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Dalka Abukaate Ceydiid C/laahi Ilka Xanaf, oo mar ka hadlay Nidaamka Federalism-ka, ayaa waxa uu ku macneeyay wax qoorta loo geliyay dadka Soomaaliyeed. Isla-markaana aanu dalka Soomaaliya noqon karin wadan Federal ah, sida uu yiri.
Ilka Xanaf, ayaa waxa uu bidhaamiyay in Nidaamka Federalism-ka loogu talla galay in lagu dhaqo dad kala diin, kala midab, kala luqad iwm. Laakiin Soomaalidu aynaan jirin meel ay ku kala duwan tahay, isla-markaana aysan qaadan karin Nidaamka Federalism-ka.
24 Dhalinyaro oo la magacbaxay Boko Xaaraam oo lagu xiray Degmada Beladxaawo
Magaalada Beladxaawo ee Gobalka Gedo, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in Magaaladaasi shalay oo Arbaco aheyd lagu xiray 24-dhalinyaro ah, kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka Degmadaasi.
Sarkaalka dhanka ammaanka u qaabilsan maamulka Degmada Beladxaawo, ayaa wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen 24-Dhalinyaro ah oo la magacbaxay (Boko Xaaraam).
Taliyaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi la magacbaxay (Boko Xaaraam) ay falal amnidaro ah ka geysan jireen xilliyada habeenkii Magaalada Beladxaawo, ciidamada ammaanka Degmadana arintaasi lagu soo wargeliyay oo ay tallaabo ka qaadeen dhalinyarada.
Sidoo kale Taliyaha ayaa ku waramay in ay sii wadi doonaan howlgalka lagu xaqiijinayo ammaanka Degmada Beladxaawo, waxaana waalidiinta dhalay caruurta uu kula dar-daarmay inay ka war hayaan caruurtooda.
Magaca (Boko Xaaraam) wuxuu ka yimid dalka Nigeria, maadaama dalkaasi ay ka jiraan Urur Argagixisada lagu daray oo ka dagaalama dalkaasi.
Ismaaciil Koofi Taliyaha ammaanka Degmada Beladxaawo ma uusan sheegin in dhalinyaradaan ay xiriir la leeyihiin Ururka Al-Shabaab, balse wuxuu ku eedeeyay kaliya in ay falal amnidaro ka geysan jireen xilliyada habeenkii Degmada gudaheeda.
Waa markii ugu horeysay Dhalinyaro la magacbaxday (Boko Xaaraam) laga maqlo Soomaaliya.
DF oo hadda yeelan doonta mucaaradkii ugu badnaa (SABABTA AKHRI)
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxaa waqti ahaan u haray 2-sano, iyadoona ay soo dhameysatay Laba kale.
Waxaa looga baahanyahay mudadaasi in dalka ay ku gaarsiiso doorasho xur ah oo qof walba kana mid ah Shacabka ay codkeeda ku dhiibanayso, hase ahaatee arimo badan ayaa horyaala.
Labadii Sano ee lasoo dhaafay ilaa hadda ma muuqato wax qabad weyn oo dhanka horumarka ah laga gaaray, maxaa yeelay waxaa faraha kasii baxay amaankii, waxaana yaraaday Kalsoonidii.
Mida ugu daran ee DF wajahday waa maamul u sameenta gobalada dalka, oo maalmahaan dambe la ogaa is qab qabsi xoogan inuu ka jiray, hase ahaatee sheekada ay sii dheeraatay.
Waxay dowladda hadda helaysaa mucaarid aad u badan, maxaa yeelay meelaha qaar maamulo aanay tagi Karin ayaa loo magacaabay, halka sidoo kale heshiishyo dadku aanay raali ka ahayn lagu qabtay Muqdisho.
Dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegeen in DF waqtigeeda uu ku dhamaan doono sidaan hadda ay tahay, sida khilaaf aan dhamaan, duulaan joogto ah iyo natiijo la’aan.
Cabdi nuure siyaad oo muuqaal xun ka baxshay Heshiiska Gobollada Dhexe
Cabdi Nuure Siyaad oo ka tirsan Siyaasiyiinta Somalia oo la hadlaayay Idaacada SKY ee Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in Heshiiska Maamulka loogu dhisaayo Gobollada Dhexe uu yahay mid aan laheyn miro dhal.
Waxa uu Tilmaamay in Heshiiska ay gadaal ka riixayaan Dowlado dano gaar ah ka leh Kheyraadka Dalka, waxa uuna farta ku goday in taasi ay daliil u tahay Maqnaanshaha Madaxweynaha Maamulka Ximin iyo Xeeb C/lahi Cali oo goobta ka maqnaa.
Cabdi-Nuura Siyaad waxa uu intaa hadalkiisa raaciyay in Heshiiska uusan waxba dhaami doonin kuwii dhow jeer Soomaalida loogu qabtay Dalka iyo dibadiisa.
‘’Waa been abuur waxan aaminsanahay in Heshiiskaasi uu yahay mid aan waxba dhaamin kuwii hore, waayo waxa uu u muuqda mid lagu indha sarcaadinaayo Soomaalida, waxaa jiro Beelo aan lagala tashan oo iyagu la rabo in loo taliyo mana soconeyso’’
Dhanka kale, waxa uu Cabdi-Nuur ugu baaqay Soomaalida inay ka fogaato wax waliba oo ay gadaal ka riixayaan Beesha Caalamka, wuxuuna Heshiiskaasi ku tilmaamay mid ku ekaa inta leys hor fadhiyay laguna doonayo in leysaga horkeeno Beelaha wada-dega G/Dhexe.
Indha Cadde oo sheegay sababta keentay Amni darida Muqdisho
Gen Yusuf Siyaad Indha Cadde oo ka tirsan Saraakiishii Hore, ayaa waxa uu sheegay in Ammaan darida ka taagan Dalka ay sabaab u tahay dhibaatooyinka ka dhex taagan Beelaha wada dega Dalka, gaar ahaan Magaalada Muqdisho iyo gacan shisheeyo oo ku dhex jirto soomaalida.
Indha Cadde waxa uu Tilmaamay in Shacabka iyo Madaxda dalka uusan ka dhexeyn wada shaqeyn taasina waxa uu ku sheegay inay tahay Sababta keentay Ammaan darida, maadaama uu yiri kalsooni aysan jirin.
‘’Ammaan waxaa keena Alle, kadib waxaa lagu gaara madax iyo bulsho wada shaqeyso ma muuqato heerka ay kuwada shaqeyn lahaayen waxaana halkaasi ka imaanaya kalsooni daro iyo wadashaqeyn xumi’’
Waxa uu intaa raaciyay in Amaan darida ay qeyb ka tahay Dharka Ciidamada oo ay wada wataan dadka, wuxuuna tusaale usoo qaatay dharka Militeriga ee lagu geysanaayo dhibaatooyinta, taasina ay tahay mid dhaliisheedu ay usoo laabaneyso Dowlada Federaalka.
Waxa uu ku baaqay in Dowlada ay ka fogaato wax waliba oo nusqaamin kara sumcadooda, taasi oo uu ula jeedo Dayacaada Ammaanka iyo dhibaatooyinka ka dhalankara, wuxuuna ka digay in loo kala hiiliyo Ciidamada Dowlada.
Dhanka kale, Indha Cadde waxa uu walaac ka muujiyay qaabka ay Dowlada u dayaceyso Ciidamada, waxa uuna ku taliyay inay xooga saarto sidii ay isugu soo dhaweyn laheyd Ciidamada iyo Shacabka si looga sal gaaro Ammaanka Dalka.
DFS ma ka warhaysaa qorshaha cusub ee Amisom ay ka leedahay KISMAAYO?
Hawl-galka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa xafiis dhinaca siyaasadda ah ka furanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka KMG ah ee Jubba, Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag oo saxaafadda la hadlay, kaddib kulan ay shalay Kismaayo ku yeesheen mas’uuliyiinta maamulka iyo wafdi ka socday midowga Afrika ayaa sheegay in xafiiska laga furayo Kismaayo, si loo dar-dar galiyo hawlaha nabad galyada.
Fartaag ayaa intaas ku daray in xafiiska siyaasadda ee AMISOM uu gacan ka geysan doono adkaynta nabad galyada iyo horumarinta ciidammada maamulka KMG ah ee Jubba.
Ku simaha wakiilka midowga Afrika u qaabbilsan arrimaha Soomaaliya, Lydia Wanyoto oo hoggaamineysey wafdiga ayaa sheegtay in midowga Afrika uu gacan siinayo maamulka Jubba iyo bulshadiisa.
Illaa iyo hadda ma kala cadda, in arrintan lagu war-geliyey dowladda federaaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho iyo in kale, hase yeeshee uma badna, sida horey looga bartay Amisom.
DF oo la timid dhaqamo cusub “Al-shabaabka dhaqankiisa ayaan ku dhaqmeynaa”…
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku goodisay in dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab ee dilalka ka geysta Magaalada Muqdisho loola dhaqmayo sida ay wax udilaan, hada kadibna ay dhamaatay dhaqankii hore ee ay Dowladda ula dhaqmi jirtay xubnaha Al-Shabaab ka tirsan.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan oo la hadlay Warbaahinta ayaa fariin hanjabaad ah u diray Dhalinyarada kamidka ah Al-Shabaab, waxaana uu ugu goodiyay in Dowladda aysan dhaafi doonin ninkii Al-Shabaab ah oo la qabto.
Wuxuu afhayeenka sheegay in sida ay dadka u dilayaan loo dilaayo Al-Shabaab oo nin waliba oo Al-Shabaab ka tirsan meesha uu qof ku dilo isagana lagu dilayo, maadaama dhaqankooda uu sidaasi yahay.
“Waa dhamaatay wixii hore nimankaan sida ay wax udilayaan oo ay udhaqmayaan ayaa loola dhaqmayaa wax badan bay Dowladda fursad siisay Al-Shabaab dhalinyarada ku jira oo kasoo baxa la dhahay laakiin waa ay diideen”Ayuu yiri Afhayeenka Wasaarada Amniga dalka.
Dhalinyarada ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa toogta raga ku jira Dowladda waxa ayna amniyaadka Al-Shabaab u dhaqmaan si naxariis la’aan ah oo ay u toogtaan xubnaha ay ku eedeynayaan inay Dowladda la shaqeeyaan.
Shalay ayeey aheyd markii Suuqa Bakaaraha gaar ahaan Nawaaxiga Shirkada Nationlink lagu toogtay labo nin oo Amniyaadka Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasi oo dilay Askari kamid ah ciidamada Nabadsugida qeybta Ruuxaanta, waxaana ciidamada Ruuxaanta u suuragashay inay dilaan labadii nin ee Askarigaasi dilay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dar-dargelisay tallaabooyinka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo bartilmaameedka ay ku hayso Xubnaha Al-Shabaab ka tirsan ee Muqdisho ku dhuumaaleysta.
Suuqa Bakaaraha oo ganacsi la’aan ah, ciidamada DF iyo kuwa AMISOM oo howlgalo culus ka dhex wada
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee Amisom, ayaa saaka baaritaano culus waxa ay ka wadaan gudaha Suuqa weyn ee Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Wadooyinka waaweyn ee laamiyada ah ee hareeraha ka mara Suuqa Bakaaraha ayaa waxaa dhooban ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Midowga Afrika iyo ciidamada Dowladda oo ganacsatada udiiday inay gudaha u galaan Suuqa Bakaaraha.
Gabi ahaanba waxaa xiran wadada wadnaha oo ah halbowlaha wadooyinka Magaalada Muqdisho oo ay si aad ah u isticmaalaan dadka iyo gaadiidka galaya Suuqa Bakaaraha.
Ciidamada Nabadsugida, Booliiska iyo kuwa Milateriga ayaa gudaha Suuqa weyn ee Bakaaraha waxa ay ka wadaan baaritaano lagu baadigoobayo hub iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inay suuqa Bakaaraha ku sugan yihiin.
Shalay Suuqa Bakaaraha waxaa lagu dilay labo xubnood oo ka tirsanaa amniyaadka Al-Shabaab oo nin Askari ahaa suuqa ku dilay, kadibna lagu dilay halkaasi.
Wadooyinka kale ee maanta xiran waxaa kamid ah wadada Baar Ubax, Black Sea, Al-Baraka ilaa Isgoyska Shiirkoole, goobahaasi oo dhan ciidamada Dowladda ayaa ku sugan oo xiray.
Ilaa hada lama ogo howlgalkaasi cida lagu soo qab-qabtay iyadoo aysan ka hadlin Saraakiisha howlgalka wada arimahaasi.
Maxaa ka jira in Al-shabaab ay go’doomiyeen magaalada Kismaayo?
Maamulka Ururka Al Shabaab ee Gobolada Jubbooyinka, ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in ay xayiraado ku soo rogayn Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Al Shabaab, ayaa ganacsatada Degmooyinka Bu’aale, Jilib, Saakow iyo Xagar isugu yeeray kulan, iyadoo saacadihii ugu dambeeyay uu ka soconaayay Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe.
Madaxa Gobolada Jubbooyinka ee Ururka Al Shabaab Sheekh C/raxmaan Xudeyfa, oo garwadeen ka ahaa kulankaan, ayaa waxa uu kaga dhawaaqay inay xaalad go’doomin ah gelinayaan Magaalada Kismaayo.
Waxa uu ganacsatadu ugu yeeray inaanay Magaalada Kismaayo u iib geynin dhuxusha, qudaarta, caanaha, xoolaha nool iyo wax kasta oo ganacsiga la xiriira. Taasina ay kaga gol lee yihiin inay cuna-qabateeyaan Kismaayo.
Sheekh C/raxmaan Xudeyfa, ayaa ku baaqay in si deg dega ah lagu xiro goobaha lagu gubo xaabada (Qoryaha) laga sameeyo dhuxusha, haddii la mamnuucay in dhuxusha loo iib geeyo suuqyada Kismaayo amaba dibadda loo dhoofiyo.
Sidoo kale waxa uu ganacsatada ugu yeeray in wixii Kismaayo kaga xiran ay ku soo dhameystaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, isla-markaana aan wax ganacsi ah Kismaayo la gaarsiin karin, wixii ka dambeeya maalinimada Jimcaha.
Dhanka kale Xoogaga Shabaab, ayaa waxay saakay nin rayid ah ku dileen Deegaanka Buulo Xaaji oo 180km u jirta Magaalada Kismaayo, xilli uu watay gaari ku rarnaa dhuxul, kuna sii jeeday Magaalada Kismaayo.
Al Shabaab waxay u muuqataa inay ka fal celineyso weerarka uu Maamulka Jubba iclaamiyay, in ay ku qaadayaan dhulka ay Al Shabaab ka joogto Gobolada Jubbooyinka.
Madaxa Maamulka Kmg ah ee Jubba Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa maalintii 1-aad ee Ciidul Fitriga ku hanjabay inay u diyaar garoobeen weeraro ka dhan ah Shabaabka Jubbooyinka.
XOG HOOSE:- Amaan dari Awgeed xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo loo qorsheeyay in Meel qura ay….
Waxaa soo baxaaya warar hoose oo sheegaaya in dowladda Soomaaliya ay wado si loo sugo amaanka xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya in dhamaantood la wada dejiyo Hal hoy.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa u sheegay Shabakada Jornalizem in dowladda Xasan Sheekh uu hogaamiyo ay doonayso in ilaa inta amniga Muqdisho laga hagaajinaayo ay xildhibaanada deganaadaan Hal hoy.
Dhanka kale xildhibaano ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u sheegay Shabakada Jornalizem in qorshahaan uu yahay mid saxan, islamarkaana weli aanay suurta gal u noqon Madaxda DF.
Qaar kale oo ka mid ah Xildhibaanada waxay sheegeen in marnaba aanay qaadan doonin fikirkaas ah in dhamaantood hal hoy la wada dejiyo Madaxtooyo ama meelo kale.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa noqday mid faraha ka baxay, waxaana maalmihii ugu dambeeyay ugaarsi lagu haayay xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Kooxda Al-shabaab ayaa ku dhaaratay inay ugaarsiga ay ku hayaan Xildhibaanada Baarlamaanka DF ay sii wadi doonaan, waxaana ugu dambeeysay Saado Cali Warsame oo maalin cad Muqdisho lagu dhex dilay.
Laba ka mid ah Amniyaadka Al-shabaab oo maanta lagu dilay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Iska horimaad bistoolado leesku adeegsaday, ayaa waxa uu duhurnimadii maanta ka dhacay Suuqa Bakaaraha, gaar ahaan dhinaca xigta Shirkadda Isgaarsiinta ee Nation Link.
Xilli ay halkaasi marayeen Ciidan ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida, ayaa waxa uu mid ka mid ah aqoonsaday laba ka mid ah dagaal-yahanada Shabaabka, oo fadhiyay dhabarka dambe ee Nation Link. Waxaana halkaasi ku dhex maray israsaasayn.
Rasaastii hore, ayaa waxay ku dhacday askari ka tirsan Nabad Suggida, oo halkaa ugu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray rasaasta, iyadoo ay carareen labadii nin ee Shabaabka, balse ay ku baxayn askartii kale, sidaana ay ku dileen.
Ilo madax banaan, ayaa xaqiijinaaya in la dilay laba ka mid ah Amniyaadka Shabaabka, iyadoo mid ka mid ah la sheegay in la dhaawac tiray, markii ay dul taggeen askar ka tirsan Nabad Suggida. Xilli uu dhaawac darani soo gaaray.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Qaranka Maxamed Yuusuf Cismaan, oo Saxaafada la hadlay, ayaa sheegay in hal nin oo kaliya laga dilay Ururka Al Shabaab. Wuxuuna meesha ka saaray ninkii la dhaawaca tiray.
Askariga ka tirsan Nabad Suggida ee iska horimaadkaan lagu dilay, ayaa waxa uu ka tirsanaa garabka Rooxaanta ee Hay’adda Nabad Suggida. Waxaana la oran jiray Cabdi Garlaawe.
Rooxaanta waxaa ku jira xubno horey kaga tirsanaa Ururka Al Shabaab, balse muddooyinkii dambe isu soo dhiibaayay Dowladda, loona sharciyeeynaayay inay ka tirsan yihiin Nabad Suggida.
DEG DEG:- Saraakiisha Maamulka Jubba & Kenya oo shir gaar ah kaga soconaayo Xarunta Shirkoole ee Magaalada Kismaayo
Saraakiisha Maamulka Kmg ah ee Jubba iyo Saraakiisha Ciidanka Kenya, ayaa waxa uu xilligaan shir gaar ah kaga soconayaa Xarunta Shirkoole ee Magaalada Kismaayo.
Shirka waxaa looga hadlayaa duulaan uu Maamulka Jubba ku baaqay in lagu qaado dhulka ay Al Shabaab ka joogto Gobolada Jubbooyinka, si loo gaarsiiyo Maamulka uu hogaamiyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Axmed Madoobe, ayaa ku sugan shirka iminka ka soconaaya Xarunta Shirkoole, iyadoo uu shirku yahay mid ay albaabada u laaban yihiin, isla-markaana aan loo ogolayn Saxaafada.
Suxufiyiinta oo looga yeeray Xarunta Shirkoole, ayaa waxaa lagu wadaa in kolka la soo gaba gabeeyo shirka, looga waramo waxa laga soo saaray.
Ciidanka Difaaca ee Kenya, ayaa ah awooda kaliya ee uu ku taagan yahay Maamulka Kmg ah ee Jubba, iyadoo uu ka caawinaayo la dagaalanka dhammaan dhinacyada aan ku qanacsanayn Siyaasada Maamulkaasi.
Ciidanka Kenya, ayaa waxay muddo 11 bilood ah ay ku qaadatay inay Shabaabka kagala wareegaan Xarunta Jubba Hoose ee Kismaayo, tan iyo markii bishii October ee sanadkii 2011 ay Kenya ku dhawaaqday hawlgalka ka dhanka ah Shabaabka.
Madaxa Maamulka Jubba, ayaa waxa uu Isniintii sheegay inay iyagu u diyaar garoobeen duulaanka ka dhan ah Ururka Al Shabaab, si looga saaro dhulka uu ka arrimiyo ee Jubbooyinka.
DAAWO:- Soomaalida oo ku talaabsatay Arin Cajiib, waligeed dad Soomaaliyeed ma sameyn!!
Soomaalida ayaa hadda waxaad moodaa inay aad isugu dayaayaan inay sameeyaan, waxa ay ku hormareen Dalalka Caalamka.
Dad Soomaaliyeed ayaa soo jilay filim aad u xiiso badan, islamarkaana ka duwan kuwii Soomaalida lagu yaqaanay.
Filimkaan ayaa ah mid la mid ah kuwa ay jilaan Bollywood iyo Hollywood, waana filim Habeysan, loona adeegsaday qalabka casriga ah ee xilligaan Filimada loo adeegsado.
HALKAAN HOOSE KA DAAWO FILIMKA
XOG:- Ciidamada Kenya oo dhawaan Kismaayo ka bixi doona (AKHRISO)
Shabakada Jornalizem oo aad uga barateen in ay banaanka soo dhigto siraha qarsoon ayaa ogaatay xog cusub kuna saabsan ciidamada Kenya oo dhawaan isaga bixi doona magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose.
Ciidamada Kenya waxay ka mid yihiin Howlgalka AMISOM, hase ahaatee Kismaayo oo kaliya ma noqon doonto inay ka baxaan, hase ahaatee waxay ka bixi doonaan guud ahaan Soomaaliya.
Baarlamaanka Kenya ayaa dhawaan waxa ay ka fariisan doonaan ciidamada Kenya sii joogistooda magaalada Muqdisho, waxaana ay kasoo saari doonaan war cad.
Xildhibaanada Kenya ayaa la sheegayaa in ay badi kasoo horjeedaan in ciidamadooda sii joogaan dalka Soomaaliya.
Ciidamada dhawaan ka bixi doona magaalada Kismaayo, waxay si KMG ah usii degaayaan degmada Dhoobleey, ilaa inta ciidankooda dhan dalka laga saaro.
Dowladda Kenya ayaa amaanka dalkeeda wax ka qaban weysay, waxayna u arkeen dhibka Al-shabaab ay ka geysanaayaan gudaha dalkaasi in horseed u tahay ciidamadooda ka dagaalamaaya Soomaaliya.
AKHRISO:- Magacyada & beelaha agaasimayaasha tirada badan ee Villa Somalia
Madaxtooyada waxay ku mashquulsan tahay magacaabista agaasimeyaasha Villa Somalia, laakiin arrinta yaabka badan waxay tahay inay ka maran tahay hanaankii dowladnimada ee xil-wareejinta.
Madaxweyne Xasan Sheekh marna xisaabta kuma dirin in agaasimeyaasha uu magacaabay ay u baahan yihiin inay xilka kala wareegaan agaasimeyaashii ka horeeyay, waxaana ay taas ka dhigtay in jagadii ay ku magacaabnaadaan laba qof.
Haddaba waxaan idiin soo gudbineynaa magacyada agaasimayaasha tiraada badan ee Villa Somalia.
1 – Agaasimaha guud madaxtooyadda Somalia Cali Balcad, Wuxuu u dhashay Hawiye – Hiilibi Dalandoole, xilka waa loo magacaabay laakiin Agaasimahii ka horeeyay Kamaal Dahir Guuleed, oo u dhashay Hawiye, habar-Gidir, Saleebaa weli kuma wareejin xilka.
2 – Agaasimaha Warfaafinta madaxtooyadda oo loo magacaabay Yuusuf Garaad Cumar, wuxuu u dhashay Hawiye, Habargidir, Ceyr, laakiin wali xilka kalama wareegin agaasimahii hore Cabdi Malik Cabdalla oo u dhashay beesha Hawiye, Xawaadle.
3 – Agaasimaha xiriirka dibadda madaxtooyada Somalia, Jamaal Baroow, wuxuu u dhashay Jareerweyne.
4 – Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda madaxtooyadda Somalia Cabdi Maxamud, wuxuu u dhashay Hawiye, Abgaal, Waceeysle.
5 – Agaasimaha Maamulka Hoowlaha guud Madaxtooyadda Somalia Ibrahim Sheekh Muxyadiin, Waa Hawiye, Abgaal, Warsengeli, xilka wali kalama wareegin Agaasimahii hore ee hoowlaha guud Maxamed Sheekh Nuur ?
6 – Agaasimaha Keeydinta dukumiintiyadda Madaxtooyadda Somalia, Xasan Khaliif, wuxuu u dhashay reer Aw Xasan.
Sarkaal ka tirsan sirdoonka Somalia oo xog xasaasi ah ka bixiyey fashilka DFS
Sarkaal ka tirsan hay’adda sirdoonka Soomaaliya ayaa bixiyey xog xasaasi ah oo ku saabsan sababta ay hay’adaha ammaanka ee dowladda ay ugu fashilmeen in ay sugaan ammaanka madaxda, xildhibaanada, wasiiradda, howl-wadeenada dowladda iyo dadka shacabka ee caadiga ah.
“Dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada waxaa si shaqsi ah u isticmaalaya saraakiisha sare ee ammaanka, oo nin walba si uu naftiisa u ilaaliya wuxuu sameeystay tiro askar xad dhaaf ah oo ilaalisa, waxa meesha ka baxay askarigii caadiga ah oo waayey mushaarkiisii” Ayuu yiri sarkaalkan, oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, isaga oo intaasi sii raaciyey in habdhaqanka madaxda Soomaalidu u egyahay sida kuwa aan kala jecleysan mas’uuliyadda waddanka ka saaran.
Sarkaalkan xogta ina siiyey wuxuu kale oo uu sheegay in dowladdu Alshabaab aaney far u dhaqaajin karin, in ay weerarto dowladdu Alshabaab iska daaye; xittaa in aysan is-difaaci karin oo mar walba ay gacan ugu baahan tahay AMISOM, sababtuna aaney aheyn in askarta dowladdu aysan ku dhici karin Alshabaab, ee sababtu ay tahay; in askariga baahan ee aan mushaarka haysan, daryeel kale warkiisa ba daa, uusan ku dhici karin inuu xabbad kala hor tago askariga kale ee u dagaalamaya Alshabaab, oo aaminsan haddii uu qof dilo iyo haddii isaga la dilo intaba inuu Janno galayo.
“Mooraalka askarta aad ayuu u liitaa, sababtuna waxey tahay dadka howsha loo dhiibay oo ay isku darsantay aqoon darro & howshii oo aysan daacad ka aheyn” Ayuu yiri sarkaalkaas, waxaa uu intaasi sii raaciyey in Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ay isugu darsatay labo mushkiladood oo middi ey tahay isagoo aan so marin khibrad dowladeed & isagoo la-taliyayaashiisu aysan isaga waxba dhaamin.
Sarkaalkan wuxuu sheegay in Dowladdu haddii ay daacad ka tahay dagaalka ay Alshabaab kula jirto in ay garanayaan halka ay Alshabaab ku xooggan yihiin, balse aaney tillaabo u qaadi karin.
“Alshabaab madaxdoodii waxey salaadda ciida ku tukadeen meel fagaare ah (Baraawe), halka Madaxda dowladda si looga ilaaliyo Alshabaab la aamini waayey askarta Dowladda, waxaa dadkii masaajidka u soo tukashada doontay baarayey askarta AMISOM. Maxaa been loo sheegayaa, yaa dalka dowlad ka ah ma Alshabaab mise dowlad ku sheega.?” Ayuu yiri sarkaalka xogtaasi ina siiyey.
Daawo Video: Xaalka muqdisho oo meel Halis ah maraya Iyo Gaadhi Lagu qabtay
Hay’adaha ammaanka dawlodda ayaa maanta fashilayay gaari uu lahaa nin shacab ah oo ay Al-Shabaab ku xireen walxaha qarxa, si ay waxyeelo u gaarsiiyaan muwaadinka Soomaaliyeed iyo bulshada inteeda kale.
HALKAN KA DAAWO VIDEOSaraakiisha amniga ayaa gaariga iyo walxaha ee ay ku xireen u soo bandhigay saxaafadda, waxaana hay’adaha amnigu ay ku guuleysteen in waxlaha qarxa laga furo, waxaana goobtii lagu soo bandhigayay gaariga ay ku sugnaayeen maamulka Degmada iyo xubno kale.
Arintaan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay Faraha ka baxday xaalada Amaan ee magaalada Muqdisho, iyadoona laga fuliyey Qaraxyo iyo waliba dilal qorshaysan.
Al-Shabaab oo ka dhawaajiyey hadal si weyn uga nixiyey AMISOM
Al-Shabaab ayaa ku hanjabtay inay weerari doonaan diyaaradaha sahayda iyo saanada u daabula Ciidamada AMISOM ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolada dalka, halkaasoo ay ku go’doonsan yihiin.
Afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere oo shalay salaadii ciida kadib meel fagaare kula hadlay kumanaan ruux degmada Baraawe ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay ku jiraan xaalad aad u liidata, isla markaana ay ku go’doomiyeen meelihii ay qabsadeen.
“Waxay ka soo bixi la’yihiin dhufeysyadooda, waa go’doonsan yihiin, baaba’ooda ayay ku jiraan, kaliya waxaa diyaarad helicopter maalin walba ay u geystaa saanad iyo sahay, kuwaas waa la soo ridi doonaa”ayuu yiri Cali Dheere.
Cali Dheere ayaa sheegay in dhowaan diyaarad ku soo rideen Galgaduud, isla markaana qorshahooda yahay inay beegsadaan kuwa kale ee saanada u sida.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in sii wadi doonaan weerarada ay ka geysanayaan Muqdisho, isagoo xusay in ay diyaar u yihiin in naftooda huraan mujaahidiinta.
“Hadii Nambar afar iyo Madaxtooyada xirtaan ama Air Porka, mana hor istaagi doontaan, anaga boqol kiiba boqol isku kalsoonahay, banaanka u soo baxa ee arka kii hor dhiman doona”ayuu yiri Cali Dheere.
Al-Shabaab ayaa bishii Ramadaan weeraro isugu jira qaraxyo iyo dilal ka geystay magaalada Muqdisho, iyadoo bishii Ramadaan ee tagtay ay aheyd bishii ugu amni xumada badneyd Caasimada Soomaaliya, dadkana ay wal wal iyo cabsi ku afuri jireen.
Waqtiga Soomaaliya ay jahwareerka ka baxayso oo qur’aanka laga qiyaasay
Dhibta haysata umadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo burburkii dawladii dhexe ee Somalia 1991 ilaa maanta ayaa waxay noqotay mid aan dhamaan wali, oo maalinba maalinta ka sii danbaysa xalkeedu uu sii fogaanayo.
Waa wax lagu yaqaan adduunka in hadii Dawlad ay si Fashilan u burburto ay waqti badan qaadanayso sidii ay mar Labaad dib ugu soo noqonayso sidii ay markii hore ahayd ama si kasii Fiican.
Hadaba Xaaladda ay dadka Soomaaliyeed ay iminka ku jiraan ayaa lagu Tilmaami karaa erayga Carabiga ah ee ah “ تيه” oo Macnahiisu yahay “ Jahwareer ama iska daba Wareeg” kaas oo ku dhaca umadd ka leexatay wadaddi ismaamulida iyo kala Danbaynta, kadibna gacanta u gashay Cadaw gudaha iyo Dibadda kaga yimid kaas oo aan wax Naxariis ah u samaynaynin.
Dhibaatooyinka Umadda Soomaaliyeed Haysta ee aan ku Tilmaami karno Jahwareerka waxa ka mid ah:
1- Dagaalo Sokeeyo oo marba Waji Cusub lasoo Baxaya.
2- Umadda Soomaliyeed oo Qaxooti aan Hayb lahayn ku ah Dalka Gudihiisa & Dibadiisa.
3- Kheyraadkii Dalkeeda oo waraabayaal ay Boobayaan.
4- Kaabayaashii Dhaqaalaha dalka oo Burburay.
5- Diintii Islaamka ee ay dhaxalka u haysteen oo dad gaar ah isku koobeen.
6- Maandooriyaal burburiyay dhaqaalihii yaraa iyo Akhlaaqdii Bulshada.
Arimahaas iyo kuwa kale oo badan oo umadda Soomaaliyeed ku Habsaday ayaa lagu Tilmaami karaa erayga Jahwareer ama luqadda Carabiga lagu dhaho “تيه”.
Hadaba Su’aashu waxay tahay Haddi ay Umaddi si Fashilan u Burburto imisa sano ayey kusoo noqon kartaa, waxaan rabaa in aan Qur’aanka Kariimka ah oo ah Dastuurka ilaahay ugu Talagalay in Adduunkaan lagu Hago aan dib u fiiriyo gaar ahaan Aayadda 26 ee Suuradda Maa’idah aayadaas oo oranaysa :
Taas oo Macnaheedu yahay “ Ilaahay wuxu yiri: Reer Banii Israil Xaaraan ayey ka tahay in Magaaladaas galaan (Qudus) Afartan sano waxayna ku Jahwareeri doonaan dhulka ee ha u murugoon (Nabi Muusaw) kuwa Daacadda ilaahay ka Baxay).
Culumadu waxay dhahaan Sababta Afartan Sano looga Mamnuucay yuhuuda in ay Qudus galaan waxay ahayd in Jiilkaas waaweyn ee ilaahay amarkiisa diiday ay dhintaan kadibna ay soo kacaan Jiil Cusub oo ilaahay amarkiisa qaata.
Halkaas waxa laga Qaadanayaa Mudadda ay Jiilashu isku Badalaan waa 40 Sano.
Hadaba waxaynu soo Qaadanaynaa Labo Dawladood oo Carab oo ah oo Jahwareer ku dhacay Bulshadoodii iyo Qiyaasid Jaanisyadda u Banaan.
Umadda reer Falastiin waxay Sanadkii 1947 u yaqaaniin Magaca la Yiraahdo “ النكبة” kaas oo macnihiisu yahay Sanadkii Kurbadda iyo kadeedka, waa sanadkii ay yuhuudu si xoog ah ugu dhawaaqeen in Dawlad Madax banana yihiin oo Reer Galbeedku ay si Rasmi ah u Aqoonsadeen.
Reer Falastiin dadkii waagaas noolaa waxay galeen Jahwareer iyo Kadeed waxayna noqdeen dad la haystayaal ah oo aan xuquuqdooda difaacan Karin.
Afartan Sano kadib waxa soo Baxay Jiil cusub oo aaminsan in yuhuud laga adkaan karo waxayna Samaysteen ururo abaabulan kuwaas oo Dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah la galay Yuhuudii. Ururkii ugu horeey ee ah urur Hubaysan waxa la aasaasay 42 Sano kadib Markii Falastiin ay gashay Gumaysiga Yuhuuda, ururkaas waa Ururka XAMAAS waxaana la aasaasay 1989.
Jiilka hadda jooga Falastiin waa ka duwanyahay kii noolaa sanadkii 1947, jiilka Hadda nool waa Jiil dhalinyaro u badan, Aqoonyahan leh, Maalqabeen leh, sidoo kale leh Xirfada Samaynta Hubka Noocyadiisa kala Duwan, waxa intaas u sii dheer Waa Jiil leh Go’aan ah in Yuhuuda Waqtigeedii uu Gabagabo yahay.
Hadaba sida laa Saadaalinayo laga soo bilaabo 1989 markaas oo iska Caabinta Yuhuuda ay Bilaabatay ilaa 2029 taas oo ah Muddo 40 Sano, waxa la Saadaalinayaa in Reer Falastiin ay Guulaysan Doonaan oo Yuhuud laga Adkaan Doono taas oo ah mid aan Hada hayno Bishaarooyinkeedii iyo Astaamaheedii.
Somaliya waa Dawlad Carbeed oo si Fashilan u burburtay, iyada Cadaw Dibada ah ma burburin laakin iyada ayaa Gacmadeeda isku Burburisay, Soomalidu waa dadka kaliya ee Aduunka Saaran ee ogol in shisheeyo Maamulo laakiin aan ogolayn in ay iyagu is Maamulaan !! Taas ayey Noqotay Boogta kaliya ee uu ka Faa’iidaystay Cadawga Soomaaliyeed.
Sidii loo dhayi lahaa Boogtaas oo Soomalidu u ogolaan lahayd in ay ismaamusho ayaa waqti badan qaadanaysa.
Hadaba hadii aan Aayadda Qur’aanka dib ugu laabano oo aan ku Dabaqno Xaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa sidaan:
Somaliya waxay Burburtay 1991.
1991+40 Sano = 2031 waxa Lagu Jiraya Jahwareerka iyo Kadeeda waayo wali waxa Nool Jiilkii hore ee Somaliya Burburiyey.
Marka la gaaro 2031 waxa Bilaabanaya dhaqdhaqaaq Wadaniyadeed oo dhiig Cusub ku shaqaynaya kaas oo isku Dayaya in uu Xaaladda wax ka Badalo, Kacdoonkaas waxa uu Socon Doonaa 40 Sano oo kale (2031-2071) si uu Ujeedooyinkiisa u Xaqiijiyo, Somaliyana uu ugu soo celiyo sidi ahayd 1990 iyo si Kasii fiican.
Ma Rabo in aan Umadda Soomaaliyeed Niyad Jabiyo laakiin ilaahay Sunooyinkiisa uu umada kula dhaqmo ayaa waxa ka mid ah in uu San Ummad Xaaladeed Waxba ka Badalin ilaa ay iyagu dhexdooda iska Badalaan.
Ilaa iyo Hadda ma Muuqato cid si Hufan oo Daacad ah iskugu taagtay in ay wax ka Qabtaan Jahwareerka Haysta Umadda Soomaaliyeed, ilaa iyo inta laga helayo Cid leh Sifaadkan soo Socda:
Cadaalad, Iska Wax u Qabsasho, Hufnaan, Eex La’aan, Isku Tiirsanaan, Ismaqal,Is aaminaad, waxaa Xaqiiqo ah in aan kusii jiri Doono Jahwareerka iyo Kadeedka ilaa iyo intii ilaahay Doono
W/Q: Maxamuud Xasan Naagadoon
Arin naxdin leh oo ka bilaabatay Magaalada Muqisho (Maxey tahay)
Iyadoo lagu guda jiro maalmaha Ciidul-fidriga, islamarkaana ay dadku yihiin kuwa isku martinaaya, ayaa waxaa la arkayaa dhacdooyin mudooyinkaani ay Magaalada Muqdisho ay ka caaganeyd.
Muqdisho ayaa waxaa ka dilaacay Dhalinyaro wadata gaadiid nooca raaxada ah kuwaasi oo afduub u geysanaaya gabdhaha da’da yar, iyadoona sidoo kale dhac u geysta dhalinyarada wata Labtoobyada iyo Mobilada qaaliga ah.
Waxaa maanta Degmada Howlwadaag ee Gobolka Banaadir lagu arkay dhalinyaro illaa Seddex ka kooban oo iyagu doonaayay inay afduub u geystaan gabar da’deedu gaareyso illaa 18-jir, waxaana kusoo baxay ka hor inta aysan afduubka u geysan dadkii ku ganacsanaayay halkaasi.
Dhacdadaani ayaa waxa ay Magaalada Muqdisho ka ahaan jirtay mid caado ah, balse waxaa mooda in sanadihii dambe laga caaganaa, wallow ay si hoose u socdaan.
Afduubka lala damacsanaa Gabadhaasi ayaa waxa uu qalqal galiyay gabdhaha da’da yar ee ku nool Degmada Howlwadaag, waxaana durbadiiba buuqa iyo sawaxanka halkaasi ka dhashay kusoo baxay Ciidamada iyo maamulka Degmada oo dabagalay gaariga, inkastoo aysan ku guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan.
Dhanka kale, waxaa mudooyinkaani Magaalada Muqdisho kusoo badanaaya dhalinyarada wadata gaadiidka raaxada oo iyagu boob u geysta dhalinta wadata Labtoobyada iyo Mobilada qaaliga ah.
Video: Waxa ka dhacay xeebta Muqdisho Dabaal Rag iyo dumar & Damaashaadka
Ciida soonfureed ee sanadkan ayaa si weyn uga duwaneyd sanadkan sidii hore, waxaana shacabku ay isugu soo bexeen goobaha barxadaha, xeebaha iyo wadooyinka magaalada Muqdisho.
Waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa muuqaal laga soo duubay Xeebta magaalada Muqdisho halkaasi oo ay udabaal tageen qaybaha kala duwan ee Bulshada oo isugu jira Rag iyo dumar.
Hub faro-badan oo gaaray Sh/hoose & dhinacyo ku biiray colaadda gobolka
Madaxweynaha Maamulka Shabeelle State Abukar Mardaadi Cabdi Cusman oo la hadlay Idaacada Risaala ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in deegaano ka tirsan Gobolka Shabeelaha ay soo gaareen hub fara badan oo ay leeyihiin Maamulka Seddexda Gobo lee Koonfur galbeed Soomaaliya.
Abukar Mardaadi Cabdi Cusman ayaa sheegay in hubkaasi gacanta loo geliyay dhinacyo ka mid ah dhinacyadii ku dagaalamaayay Gobolka Shabeelaha Hoose, waxa uuna intaasi ku daray in dagaal dambe oo ka dhaca Shabeelaha hoose ay masuuliyadiisa qadeyso Maamulka Seddexda Gobol ee Koonfur galbeed Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in maamulkaasi uu si toos iyo si dadbanna ugu lug lee yahay colaadda gobolka, ayna qaadayaan mas’uuliyadda wixii hadda kadb dhaca.
Madaxweynaha Maamulka Shabeelle State ayaa Sidoo kale Sheegay in Maamulkooda uu leeyahay Ciidamo iyo Darees u gaar ah kuwaasi oo ka howl galaya Deegaanada uu ka Arrimiyo Mamulkooda.
Deegaano iyo Degmooyinka ka tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa inta badan waxa ka dhaca Dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelaha daga Gobolkaasi.
Madaxwayne Cabdiwali Cali Gaas oo Salaadii Ciida Garoowe kula tukaday Kumanaan dad weyne ah (Daawo Sawirada)
Madaxwaynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta Magaalada Garoowe gaar ahaan Garoonka Kubadda Cagta kula tukaday Salaadii Ciida Kumanaan Dadweyne ah .
Tukashada Salaada Ciida ayaa waxaa sidookale Goob joog ahaa Madaxwayne ku xigeenka Dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camay,Wasiiro,Waxgarad,Isimo,Cuqaal iyo Dadweyne Badan .
Madaxwaynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Salaada Ciida kahor lahadlay Dadwaynihii ku sugnaa Goobta,waxana uu u Hambalyeeyay dhamaan Umadda Muslimiinta ah meelkasta oo ay joogan.
‘’Waxaan leeyahay Ciid Wanaagsan Umadda Muslimiinta ah,Umadda Puntland iyo Dhamaan Umadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan waxaan leeyahay Ciid Mubaarak’’Ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
‘’Waxaan aad ugu faraxsanahay in Garaad Saleebaan Garaad Maxamed iyo Garaad Abshir Saalax iyo odayaasha kale ee inoo yimi inay maanta inala joogaan oo farxada inala qayb sanayaan,waxana ogtihiin in ififaalo fiican oo soo noqosho ay u tahay Puntland’’Ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
‘’Waxaanu sii daynay boqol iyo Labaatan maxbuuxs (120) maadama bishaan ay tahay bil cafis dadka aan siidaynayna waxaan isleenahay maahan kuwo khatar weyn gaysanaya dhamaanteena waxaan ku dar daarmaya is cafis’’Ayuu yiri Madaxwaynaha Dowladda Puntland Mudane Cabdiwali Gaas.